Kedu ihe kpatara enweghị ngwa azụmahịa na Linux? | Site na Linux
Kedu ihe kpatara enweghị ngwa azụmahịa na Linux?
Ugboko92 | | GNU / Linux, Noticias, Netwọk / Sava
Aha nwere ike ịbụ ihe na-atụ ụjọ n'ihi na ụfọdụ ngwa azụmaahịa dị, mana pasent dị ala n'ezie. Enwere ọtụtụ ihe kpatara ihe ndị a na nke m ga-ekwu maka ya taa, n'ihi na n'ezie ọ bụrụ na edozi nsogbu ndị a taa anyị ga-enwe akụkọ ọzọ ịgụ.
Ntisa bụ nsogbu bụ isi site n'echiche a, ọ nwere ike ịtụghachite ọtụtụ ndị mmemme, dịka ọmụmaatụ enwere m ike ịzụlite egwuregwu na-arụ ọrụ nke ọma na xorg penultimate, mana na distro ọzọ nwere nke ọzọ xorg
anaghịzi arụ ọrụ.
Nsogbu nke ngwugwu dịkwa mkpa, anyị niile nwere ike icheta na naanị Spotify na-enye ụgwọ maka Ubuntu na ha kwesịrị na site na ihe m ghọtara na ọ kwụsịrị inye rpm maka fedora, ya mere a na-amanye ndị ọrụ iji ngwaọrụ ndị na-akwadoghị iji gbanwee deb na rpm, tar.xz, pisi ma ọ bụ ihe ọ bụla.
Ozugbo anyị meriri mgbochi ahụ, anyị na-ahụta nsogbu nke ụdị amamihe. Na Linux enwere ọtụtụ ụdị nke ndị ọrụ mana n'ezie abụọ na - akwụsịkarị, onye ọrụ na - ekwu na ọ na - eji Linux n'ihi na ọ bụ n'efu ma enweghị nje na onye ọrụ na - eji ya maka echiche.
Ndị ọrụ na-eji Linux n'ihi na ọ bụ n'efu ga-emefu ihe karịrị € / $ 100 maka Photoshop ọ ga-emesị kwụsị ịkwapụ Windows ma ọ bụ họrọ maka nnwere onwe ọzọ, ebe ndị ọrụ na-eji Linux maka echiche ga-ahọrọ ịghara iji ngwa naanị maka ikike (Enwere ndị ole na ole n'ime ndị ọrụ a).
Ka anyị tinye ọnọdụ a, ka anyị were Windows na 92% nke ahịa, o nwere ngwa dị ka Photoshop nke ahụ na-efu akụ ha, n'ezie ihe karịrị 6 ma ọ bụ 7% nke ndị ọrụ ahụ ga-azụta mmemme ahụ ma n'ikpeazụ ndị ọzọ ga-ahọrọ mbanye anataghị ikike ya, ugbu a, ka anyị kwaga nke a na Linux ma chee banyere 2% nke ndị ọrụ yana nke ndị 2% ha na-ejedebe ịzụta ya 6 ma ọ bụ 7% (n'ihi na anyị abụghị ndị mmepe niile), ọ ga - abụrịrị ihe efu maka ụlọ ọrụ na n'ikpeazụ naanị ihe dị mkpa bụ ịbawanye uru ya na ọ gaghị eche banyere ikpo okwu nke ọ na - etolite, mana naanị ego.
Ọ bụrụ na enwere ihe m ghọtara, ụwa nke sọftụwia niile anaghị akwụ ụgwọ agaghị enwe ike iru, sọftụwia dị ka ngwaahịa azụmaahịa nke ụlọ ọrụ, ikekwe mmadụ kwenyere na nnukwu ụlọ ọrụ ga-ekpughere usoro esi eme ihe maka kpakpando ya ( Coca cola dịka ọmụmaatụ),, Ka otu ụlọ ọrụ China wee bia detuo ya? ( ụlọ ọrụ ga-atụfu nnukwu ego). Softwarewa ngwanrọ anaghị akwụ ụgwọ na nke ahụ, anyị ga-aghọta na ọ siri ike maka mmemme azụmaahịa enwere onwe ya ma anyị kwesịrị ịghọta na ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ndị ọzọ nweere onwe ha nwee otu ọkwa ahụ, ndị mmepe ga-enwe ụgwọ ọnwa ha ga-eri, dịrị ndụ A naghị enweta nke ahụ naanị na ndabere nke onyinye, onye ọrụ ọ bụla kwesịrị ka ụgwọ ọnwa ya.
Nke a bụ m dị umeala n'obi uche, echiche na niile ngwanrọ bụrụ n'efu, Ọ bụ kpam kpam ekwekọghị na echiche nke a ụlọ ọrụ, nke bụ ime ka ego na kacha uru na ikekwe n'ihi na ọtụtụ ndị ọzọ ụlọ ọrụ na-etinye anya ha na Linux, anyị ga-agbanwe ụzọ anyị si eche echiche, ma o doro anya na nke a abụghị ihe nke a ụbọchị .
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Kedu ihe kpatara enweghị ngwa azụmahịa na Linux?
Ihe 77 kwuru
Nke ahụ bụ eziokwu, enwere m onye mmume na-eme mmemme na nkịta ọhịa, na azịza ya dị mfe mgbe ọ na-agwa ya ka ọ jiri linux bụ: "ha anaghị akwụ ụgwọ maka na ọ bụ n'efu".
Echere m mgbe niile ị na-akwụ ụgwọ iji wụnye ya, eziokwu ahụ bụ na ọ bụ n'efu apụtaghị na arụnyere ya naanị, ọ pụtaghị na agbakwunyere ngwa ahụ n'onwe ha ma pekarịa na ha mụtara iji anwansi.
Enweghị m ike ikwenye gị ọzọ.
Ọtụtụ ihe na-emetụta ihe ị na-ekwu na paragraf ikpeazụ, nkesa ole na ole nwere echiche na ihe niile bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ (enwere ike ịgụta ha na mkpịsị aka aka ha), ma enwere ụlọ ọrụ na - akpata ego buru ibu ma na - atụnye ụtụ na free software (kpochapụwo ihe atụ, Uhie okpu). Kwesighi ịkwụ ụgwọ maka ire ngwaahịa ahụ n'onwe ya, mana maka nkwado ahụ, ọ na - enyere aka ...
Say na-ekwu na ụlọ ọrụ enweghị ike ikpughe ihe nzuzo ha n'ihi na ọ bụghị na ndị ọzọ ga-e copyomi ha ma ha ga-aga ọkụ mmụọ. Mana ihe na-ezighi ezi m bụ ihu abụọ nke ụlọ ọrụ ndị a, nke na-enweghị sọftụwia n'efu enweghị ike ịdị, mana o doro anya na mgbe ị na-ekwu maka ịhapụ koodu ha na-etinye aka ha n'isi. Enwere ụzọ na ụzọ ị ga-esi na-azụ ahịa, mana ọ bụrụ na ị nwere ike iji sọftụwia na-akwụghị ụgwọ, naanị ị ga-ama ihe ma mara otu esi erigbu ya.
Ekwadoro m ịgụ echiche a (yana ihe ị kwuru):
Amilcar, n'ezie enwere m ike ịgba ụgwọ maka nkwado, mana ọ bụrụ na ana m akwụ ụgwọ maka mmemme m, ọ dịrị m mfe ị nweta ego karịa, cheta na anyị nọ n'ụwa onye isi ike ma ọ bụrụ na m ga-akwụ gị ụgwọ maka nkwado na maka mmemme m ga-eme ya, n'ihi na m nọ n'aka nri m, ọ ga-abụ ihe na-adịghị mma n'ezie, mana enwere m ike ịkụji aka m na ọtụtụ afọ ọrụ ma ugbu a ana m akwụ ụgwọ ihe m chọrọ. ọ bụ otu ahụ.
M na-ekwu ya dịka ọmụmaatụ.
Ikwuru eziokwu mana enwere ụfọdụ ihe ụlọ ọrụ kọmpụta nwere ike ime ebe ọ bụ na anyị ga-eme ihe n'eziokwu, ihe niile ha mepụtara na-akwado teknụzụ na-akwụghị ụgwọ, n'eziokwu, taa ọ dị obere na ihe anaghị esonye na teknụzụ na-akwụghị ụgwọ na ọ bụ ya mere m ji achọta ihe ụlọ ọrụ nwere ike ime, nke ahụ bụ ịnweta n'efu ihe nke koodu gị.
Bịanụ, damn, anyị niile ji ihe ụgwọ iji nweta sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, ọ dịkwa ka Ricardo de Galli si kwuo, "opekata mpe nyeghachi obodo ihe mere nnukwu ihe maka azụmahịa gị" ...
Mana m ga-ahapụrụ gị edemede ahụ, ọ dị mkpụmkpụ mana ọ dị oke oke ma nwee echiche, ana m akwado ya nke ọma: koodu ntọhapụ, ọrụ omume
Ihe bụ nsogbu bụ na ụlọ ọrụ ndị na omume omume nwụrụ nke-achịkwa ọchị XD
Ka m mee gị nkwado ihu ọma maka ụdị ọmarịcha isiokwu a. Akwụkwọ ozi site na leta ị kwupụtara n'ụzọ zuru oke echiche m na-enwebu na isiokwu a na enweghị m ike ịkọwa n'ụzọ zuru oke. Ekele m, agbanyeghị na amaara m na ọtụtụ agaghị ekwenye, ekwere m n'onwe gị na ị gaghị eme ka eziokwu nke ọnọdụ a doo anya.
O di nwute na enweghị m ike ikwenye na ụfọdụ n'ime ihe ndị ị gwara anyị, pandev92, mana anyị na-aga n'akụkụ:
Ntisa bụ nsogbu bụ isi site n'echiche a, ọ nwere ike ịla azụ ọtụtụ ndị mmemme, dịka ọmụmaatụ m nwere ike mepee egwuregwu na-arụ ọrụ nke ọma na xorg penultimate, mana na distro ọzọ nwere xorg ọzọ
Nke a bụ ikwu kpam kpam. Ọtụtụ mgbe (rịba ama ruturu ọnụ) mgbe ewepụtara ụdị ọhụụ nke ngwa, ọ nwere nkwado maka arụmọrụ ochie. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, na tiori, ihe na-arụ ọrụ na Xorg 7.0 (dịka ọmụmaatụ), kwesịrị ịrụ ọrụ na Xorg 7.1. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, nke a abụghị ihe ngọpụ, ma ọ bụrụ na ọ dị, ị nwere ike imelite egwuregwu ahụ oge niile, nri? Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-ana n'ihi na, ị pụrụ ime ka a uru site n'ebe there
Nsogbu ngwugwu ahụ dịkwa mkpa, anyị niile nwere ike icheta na Spotify naanị na-enye ụgwọ maka Ubuntu na ha kwesịrị na site na ihe m ghọtara, ọ kwụsịrị inye rpm maka fedora, yabụ na mgbakwunye ndị ọrụ na-amanye iji ngwaọrụ ndị na-adịghị agbanwe agbanwe iji gbanwee ụgwọ ahụ rpm, tar.xz, pisi ma ọ bụ ihe ọ bụla.
Ọ bụghịkwa nsogbu. Onye okike na-anapụta tarballs na nkesa dị iche iche na-elekọta ịkwakọba ya ka ọ na-eme na ọtụtụ puku ngwa.
Nke a bụ okwu ọzọ. Nke ahụ dabere na onye ọrụ. Ọtụtụ ndị ọrụ Linux ga-eji Windows n'ihi na enwere ngwaọrụ dịka Photoshop ndị na-adịghị maka OS anyị. Ichere n’ezie na onye ọrụ a agaghị akwụ ụgwọ iji nweta ngwa ọrụ ọchọrọ iji rụọ ọrụ na OS nke nhọrọ ya? Ekwenyesiri m ike na ọtụtụ ndị na-ebi ndụ site na imewe, dịka ọmụmaatụ, ma jiri Linux, ga-akwụ ụgwọ ịnweta ngwaọrụ ọkachamara.
Ihe omuma atu nke a bu Nero Linux, otu Nero si Windows na Linux. Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ndị ga-anataghị ikike ya, mana nke ahụ nwere ike ime maka ihe abụọ:
- N'ihi na onye ọrụ enweghị scruples ma ọ bụ,
- Naanị n'ihi na ọ nweghị ike.
Na n'ọnọdụ ndị a, ọ ga-akacha mma iji ngwaọrụ anyị nwere, dị ezigbo mma n'ụzọ (K3B, Brasero, Xfburn). N'okpuru ala: Ọ bụrụ na agwa gị dabere na ya, ị ga-akwụ ụgwọ iji nweta ngwaọrụ ndị dị mkpa na os kachasị amasị gị.
Ọ bụrụ na enwere ihe m ghọtara, ụwa ebe ngwanrọ niile anaghị akwụ ụgwọ agaghị enwe ike iru, sọftụwia dị ka ngwaahịa azụmaahịa nke ụlọ ọrụ, ikekwe mmadụ kwenyere na nnukwu ụlọ ọrụ ga-ekpughe usoro nhazi nke ngwaahịa kpakpando ya (coca cola for )maatụ), maka ụlọ ọrụ China ịbịa depụta ya? (ụlọ ọrụ ga-efu nnukwu ego).
Ọ bụ ezie na ịtụgharị uche na-enwe isi, ị nwere ike ihie ụzọ.
Ka anyi kwuo na Coca Cola weputara uzo ya ugbua n'okpuru ikike ufodu dika GPL. Ntụziaka ka bụ nke ha. Mgbe ụlọ ọrụ ọzọ na-edepụta otu ihe ahụ, ọ ga-amata ebe o si nweta ya ma ọ ga-akọrịrị mgbanwe ndị o mere na ya.
N'ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na Coca Cola chọpụta mgbanwe bara uru, ọ ga-ewe ya site na ịmeghachi usoro gara aga na ihe ndị ọzọ. Ma onye ga-emeri mgbe niile? Coca Cola, maka ugwu na nkwa na ngwaahịa ya kacha mma.
Ana m enye gị ihe atụ dị mfe karị. Kedu ihe kpatara ọtụtụ ndị ọrụ anaghị eji Chrome na Chromium ma ọ bụ SRWare Iron? N'ihi eziokwu na Chrome dị njọ karịa? Nope, ha na eme ya maka ihe nzuzo na ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na Chrome enweghị nke ahụ, n'agbanyeghị ole ndụdụ ha mere, ndị ọrụ ga-ahọrọ iji Chrome, nke bụ ihe mbụ, ugwu, mgbasa ozi, nkwado na ihe ndị ọzọ ... Mgbe mmadụ na-akwụ ụgwọ maka ụfọdụ ngwaahịa, ha na-eche echiche nke « àgwà, nchekwa, nkwa, anwụ ngwa ngwa, ugwu ... wdg. »
Amaghi m ma m mee ka m ghota
- Naanị n'ihi na ịnweghị ike
Ọ bụ bullshit ime nke ahụ, na Nero otu n'ime nsogbu ndị ahụ nwere ike ịbụ egwu nke iji ihe ọhụrụ (ọ bụ ezie na enwere ike ikwu otu ihe ahụ maka Linux).
Inwe uzo ozo nke di bu oligophrenia iji kpochapu Nero Linux, K3b di m ka ihe kachasi nma ma o yikwara Nero
Ọ bụrụ n’ị banye n’otu ọgbakọ a na-akpọ ba ka, ị ga-ahụ na hazọrọ neoro linux, mana ị hụrụ? Gị onwe gị na-agwa m na tupu ị jiri ngwa ọzọ ma ọ bụ ya mere ọtụtụ puku ihe ndị ọzọ.
Ọ bụ ihe na-eme ka ndụ m sie ike mgbe m nwere ike itinye iwu dị mfe na ọnụ iji wụnye Brasero ma ọ bụ K3b yiri obere chorra
Anyị na-aga akụkụ
Nke a bụ ikwu kpam kpam. Ọtụtụ mgbe (rịba ama na ọnụego) mgbe ewepụtara ụdị ọhụụ nke ngwa, ọ nwere nkwado maka atụmatụ ndị gara aga. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, na tiori, ihe na-arụ ọrụ na Xorg 7.0 (dịka ọmụmaatụ), kwesịrị ịrụ ọrụ na Xorg 7.1. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, nke a abụghị ihe ngọpụ, ma ọ bụrụ na ọ bụ, ị nwere ike imelite egwuregwu mgbe niile, nri? Ọbụlagodi na ị na-akwụ ụgwọ maka ya, ị nwere ike nweta uru site ebe ahụ.
N'ozuzu ọ dịghị otú ahụ, na Linux ị gbanwere ihe ọ bụla abụọ site na atọ ma anyị ga-echere ka ndị nwe obodo na-eme ka ndị ọkwọ ụgbọ ala melite na mgbe ahụ ndị mmepe egwuregwu, na windo ha anaghị agbanwe ihe ọ bụla n'ihi na ha enweghị nke ahụ, ha na-emezi ndozi ahụhụ na ụgbọ mmiri SP kwa afọ 2-3.
N'ozuzu, ngwanrọ nwere ngwongwo (mgbe ụfọdụ m na-ahụ ya na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ) anaghị ekesa ya na tarball mana na ngwungwu edeturu, ọ dị mfe, m nyegoro gị ihe atụ nke Spotify, ọ bụ eziokwu?
Ana m enye gị ihe atụ dị mfe karị. Kedu ihe kpatara ọtụtụ ndị ọrụ anaghị eji Chrome na Chromium ma ọ bụ SRWare Iron? N'ihi eziokwu na Chrome dị njọ karịa? Nope, ha na eme ya maka ihe nzuzo na ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na Chrome enweghị nke ọ bụla, n'agbanyeghị ole ndụdụ ha mere, ndị ọrụ ga-ahọrọ iji Chrome, nke bụ ihe mbụ, ugwu, mgbasa ozi, nkwado na ndị ọzọ ... Mgbe mmadụ na-akwụ ụgwọ ụfọdụ ngwaahịa, ha na-eme ya na-eche "mma, nchekwa, nkwa, nkwụsi ike, ugwu ... wdg."
See na-ahụ ya n'ụzọ ahụ mana m na-amụ ahịa ahịa ma ana m agwa gị na Coca Cola enweghị mmasị na onye ọzọ maara usoro ha, ọ bụrụ na m detuo Coca Cola wee kwuo na usoro ha si n'aka ha ma n'elu m tinye ngwaahịa ahụ ọkara dị ọnụ ala, nke ọma Ndị mmadụ agaghị eche na Coca Cola, ha ga-ahọrọ ịzụta ngwaahịa dị ọnụ ala nke na-atọ otu ahụ, amaghị m ma ị ghọtara m. Mgbe ahụ coca cola ga-efunahụ 60-70% nke ahịa ya ma ọ ga-anọ na 20 ma ọ bụ 30, n'ihi na ọ baghị uru ole ha mepụtara, ndị ọzọ nwere ike i copyomi ha. Emeela ụlọ ọrụ ka ha nweta ego (nke ahụ bụ ebumnuche ha bụ isi, nke abụọ bụ imeju ndị ahịa), yabụ na ha enweghị iberibe ịhapụ ida ha naanị na ahịa. Ọ bụ echiche ezi uche dị na ya ma dị mfe.
Nsogbu ịghọta nke a bụ na ị ga-anọrịrị na ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ ijeri euro kwa afọ.
Dị ka i kwuru, isi ebumnuche nke ụlọ ọrụ bụ ịkpata ego na nke abụọ iji mejuo onye ahịa ahụ, ihe ngwanrọ n'efu na-eme bụ ịtụgharị nke ahụ, ị ​​nwere ike nweta obere ngwanrọ na ngwanrọ ugbu a, mana echi ị ga-enweta ọtụtụ ihe ọzọ, ebe ọ bụ na ngwanrọ n'efu ga-abụ nke na-enye ngwa, mmemme, egwuregwu na ndị ọzọ iji kwado ndị na-azụ ahịa, yana nke a ga-enwe ike ikpebi ma ọ ga-akwụ ụgwọ ya, ọ bụ ezie na ngwanrọ ahụ bụ n'efu, ọ bụghị n'efu, yabụ ọ bụrụ ịchọrọ ịkwụ ụgwọ maka ya, gaa n'ihu, a ga-enwe ọtụtụ ndị nwere mkpịsị aka abụọ nke ọkpọiso ga-ama otu esi ahọrọ. Ọ bụrụhaala na nnukwu ụlọ ọrụ na-etinye onwe ha n'ihu ndị ahịa, sọftụwia na - akwụghị ụgwọ ga - emeri, ma ọ bụ yabụ echere m n'echiche m, ebe ọ bụ na m na - ahọrọ iji aka m nye onyinye euro 50 (ọnụ ọgụgụ a nwere ike ịdị elu ma ọ bụ dị ala dabere na ụgwọ ọnwa m) na firefox ma ọ bụ google iji nweta ihe nchọgharị gi iji kwụọ Microsoft otu ego ma ọ bụ karịa ka ị nweta ihe ha kwuru bụ ihe nchọgharị.
Ka anyị nwee olile anya na otu ụbọchị ihe ikwuru ga-emezu, mana ekwenyeghị m ya nke ọma, ụmụ mmadụ na-achọ ọdịmma onwe ha ma na-esiri ha ike ịkekọrịta, anyị ga-ahụ n'afọ ndị na-abịanụ.
Ndị ụlọ ọrụ ga-anọgide na-akpata ego, ihe kwesịrị ịgbanwe bụ ụdị azụmaahịa. Will gaghị eche na Coca-Cola bụ ebe ọ dị maka ịghara inupụ isi na usoro nzuzo ya. Ọbụna ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ eziokwu, oriri nke cola ga-aga n'ihu, naanị na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ ga-ekpuchi ya, ma ọ bụ na oriri ahụ ga-adị na mmanya ndị ọzọ dị nro, nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ ga-arụpụta ego ha ga-enweta site na ọrụ ha. A ka nwere ụlọ ọrụ na-eduga, mana enweghị ike ijide ụdị ahịa a, nke ga-aka mma, na ọkwa niile (akụ na ụba, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, wdg ...). Enwere ike ịlaghachi na isi ego belatara, mana ikekwe ọ dị mkpa iji nweta ihe ụfọdụ na-akpata. Ruo ókè ha a itaa ka ọ dị mma na ndị dị ka Maazi Gates, Facebook, ma ọ bụ Apple, na-enweta ego na ike dị otú ahụ. Corpolọ ọrụ dị njọ karị. Monopolies bụ ihe nzuzu n'onwe ha.
Ọrụ m ruo mgbe ọnwa ole na ole gara aga, dị ka onye njikwa nke ụlọ ọrụ, nke ọrụ ya mgbe m malitere, dabere na ire ngwaahịa na ahịa ọkachamara n'okpuru usoro nke ụlọ ọrụ niile dị na ngalaba ahụ chebere dị ka a ga - asị na ndụ ha dabere na ya. , dị ka ihe nzuzo ọkachamara na nke a na-ekpughereghị ya, na-adabere na edemede nke usoro dị otú ahụ, na-adabere na akụkụ dị mma nke azụmahịa ya na ya. Ọfọn, ọtụtụ afọ gara aga, obere ụlọ ọrụ ole na ole malitere imebi nke ahụ, na-ebute usoro nke ngwaahịa anyị na ndị ahịa na nghọta zuru oke na nghọta doro anya, na-etinye nkwa na ụdị azụmahịa dị iche iche, ndị enyi ufff, nke ahụ bụ ezigbo mgbanwe na ahịa. Ehhhh, nke ọma anaghị m agwa gị ndụ m, ihe m mere, ụdị azụmaahịa ahụ gara nke ọma ma taa ọ bụ ya na-enye ahịa ahịa. Continue na-aga n'ihu na-akpata ego, mana n'ụzọ dị iche, na ọ bụghị site na ịlaghachi oke oge ụfọdụ, ihe na-adịghị mkpa, ọ bụghị ibi ndụ, ma ọ bụ ibi ezigbo ndụ. Ndị ọkachamara na-ahụ maka usoro a dị mkpa karịa na mbụ, ihe na-eme bụ na ebe otu na-efu efu, ugbu a enwere atọ, ebe otu ebubo ihe na-abaghị uru, ugbu a ha na-enweta ihe ha na-akwụ na ndị tozuru oke na-aga n'ihu na-enweta ego karịa.
Site na ngwanrọ, echere m na ihe yiri nke ahụ ga-eme, mgbe nnukwu onye nrụpụta ma ọ bụ ọtụtụ ndị obere, na-ere ngwaahịa ha na linux arụnyere, ahịa na-azakwa, ọ ga-enweta nnukwu uru karịa ndị nrụpụta ndị ọzọ. Kedu ụgwọ nke ịwụnye windo na laptọọpụ Samsung, maka ndị nrụpụta ya? ọmụmaatụ. Gini mere onye n'ji gha agha ugwo ya? Kedu ihe kpatara na ụlọ ọrụ ga-akwụ ụgwọ maka mmepe ngwaahịa ka ọ bụrụ na ọ bụghị nke ya, mana onye akwụ ụgwọ maka mmepe ahụ? Ọ bụrụ na m rụọ ụlọ ma were onye na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ mee atụmatụ ahụ, kedụ atụmatụ ha? Site na ya, ma obu nke m.
Redhart bụ ntụaka taa dị ka a ga - asị na ọ ga - ekwe omume. Echeghị m na ọ bụ naanị otu, ma ọ bụ naanị ụzọ iji mee ya.
Mgbe ahịa dị njikere, ị ga-ahụ otu ngwa ngwa ụlọ ọrụ na-emegharị ka ịga n'ihu na-akpata ego, ha ga-adị otu ihe ahụ, na-emegharị maka oge ma ọ bụ ndị ọzọ na-ebili; ma nke ahụ bụ iwu nke ndụ.
Ajuju m juru aju, na enweghi m ike ịza, bu mgbe ahia ga adi njikere maka mgbanwe a na olee mgbe ndi kompeni ndi nwere ikike n’ezie ime ya nwere obi ike ime ya.
Esmorga, bụ na ihe ọ bụla m gwara gị bụ akụkụ nke usoro ikekete na nnwere onwe nke kachasị n'ụwa, ọ bụ ihe nzuzu na ndị mmadụ dịka Tito Bill na-akpata nnukwu ego, ee, mana ọ bụ ihe dị ma enwere m obi abụọ na ọ ga-agbanwe n'oge dị mkpirikpi, enwere ike ogologo oge (afọ 40-50)
See na-ahụ ya n'ụzọ ahụ mana m na-amụ ahịa ahịa ma ana m agwa gị na Coca Cola enweghị mmasị na onye ọzọ maara usoro ha, ọ bụrụ na m detuo Coca Cola wee kwuo na usoro ha si n'aka ha ma n'elu m tinye ngwaahịa ahụ ọkara dị ọnụ ala, nke ọma Ndị mmadụ agaghị eche na Coca Cola, ha ga-ahọrọ ịzụta ngwaahịa dị ọnụ ala nke na-atọ otu ahụ, amaghị m ma ị ghọtara m. Mgbe ahụ, coca cola ga-efunahụ 60-70% nke ahịa ya ma ọ ga-anọgide na 20 ma ọ bụ 30, n'ihi na ọ nweghị mkpa ole ha mepụtara, ndị ọzọ nwere ike i copyomi ha. Emeela ụlọ ọrụ ka ha nweta ego (nke ahụ bụ ebumnuche ha bụ isi, nke abụọ bụ imeju ndị ahịa), yabụ na ha enweghị iberibe ịhapụ ida ha naanị na ahịa. Ọ bụ echiche ezi uche dị na ya ma dị mfe
Gụghị nke ọma ihe m tinyere ziri ezi? Nke ahụ bụ ihe ikikere dị maka. Ọ bụrụ n’irubereghị isi, mgbe ahụ ị ga-akwụ ụgwọ otu nde n’ime okwu ikpe. Gụọ ọzọ ihe m tinyere na akwụkwọ ikike.
Ka anyị hụ elav, agụọla m ọzọ, na m na-akọkwa ebe m si nweta nri nke ọ ga-esi na-arụ coca cola? N'ogo kachasị ha ga-enweta ikikere ebe ha na-akwụ ụgwọ ka i wee nwee ike iji uzommeputa ahụ, mana nke ahụ M na-eri ahịa m maara na ị dị ka ụlọ ọrụ depụtaghachiri site na nke ọzọ, Achọghị m ịma, ọ bụrụ na ọ maara otu ihe ahụ m zụrụ ndị dị ọnụ ala.
Enwere m ike ị tinyelarị nkọwa na mobile xd m
E nwere nnukwu ọgba aghara ebe a.
Ọ bụ otu ihe ikwu maka mmemme ịkwụ ụgwọ yana nke ọzọ gbasara nkesa ụgwọ ...
Ọ bụ otu ihe ikwu maka mmemme ịkwụ ụgwọ n'efu yana nke ọzọ gbasara mmemme akwụmụgwọ emechiri emechi ...
Enwere ọtụtụ ngwanrọ azụmahịa (emechi maka ịkwụ ụgwọ), ihe atụ doro anya bụ Oracle DB, Oracle App na ndị ezinụlọ ha ndị ọzọ. Synmatec nwere ndị ọrụ nchekwa maka sava Linux na ebe ọrụ. Enwere antivirus (dị ka ihe nzuzu ka ọ na-ada) Avast4Linux dịka ọmụmaatụ. Enwere sọftụwia CAD, nke anaghị m echeta aha ahụ, enwere ọtụtụ ihe atụ, na anaghị eji ha nrụnye nke onwe apụtaghị na anaghị eji ha n'ọfịs ma ọ bụ ụlọ ọrụ.
Ihe na-abụghị bụ ụdị faux software dịka ConvertXXXXtoXXX Win Deluxe, n'ihi na ụdị mmemme ndị a na Linux dị mma karịa ma ọ bụ na ọ dịghị mkpa, ịghara ịkọ na na Windows ị ga-akụ, ma ọ bụ kwụọ ụgwọ. Mgbe Linux bụ n'efu.
Na ihe ha na-anaghị akwụ ụgwọ, pfffff lee HumbleBundle ikpeazụ, n'ọnọdụ niile ndị ọrụ Linux bụ ndị kwụrụ ụgwọ kachasị na nkezi. Mụ onwe m azụtụbeghị ihe ọ bụla, azụrụ m HB3 HBFS na HB4.
Ka ọ dị! »
PS: Tupu ị chọpụta nkwubi okwu, ị ga-amata akụkụ niile nke ọma, ọ bụghị naanị onye ọrụ nwere mmasị na Linux ma chọọ ka ihe niile nwere onwe ha.
Ka anyi hu, echere m na emegoro m nwa doro anya nke oma ka m ghara ikowa ya. Anyị na-ekwu maka mmemme azụmahịa, site na azụmahịa m ghọtara mmemme nke ọtụtụ ndị mmadụ na nke ahụ nwere ikike, ọ bụghị CAD nke dị mma maka 1% nke ndị ọrụ pc n'ụwa. Ana m ekwu maka Nero Suite zuru ezu, Adobe zuru ezu, nnukwu mmemme redio zuru ezu dị ka onye mgbasa ozi sam na ya mere enwere m ike ikwu.
Ejila m ịzụta obere egwuregwu atọ nke 10 euro na ịzụta mmemme nwere ike ịba uru 150 euro.
O doro anya, Oracle zuru ezu iji zụọ ahịa ruru 150 haha. Have maghị ihe ị na-ekwu, mgbe ị matara Linux na mpụga ụlọ gị, mee edemede ọzọ. Ka ọ dị
Ana m ekele gị nke ukwuu maka okwu gị nke na-enye amamihe na nghọta maka isi okwu a, biko, gaa n'ihu mgbe niile. Lee, anyị ga-eche gị.
Ma ọ bụ karịa, ka anyị cheta na Photoshop CS bara uru karịa € 1000, ka anyị hụ onye bụ Mongolian nke zụtara ya
Onye ọ bụla Mongolian onye akpata ya agwa na .. Na-eto Uko, na ọ bụghị ihe niile nwere ike iwere dị otú ahụ etozu enyi m.
Abụghị m enyi onye ọ bụla ma ọ bụ onye ọ bụla bụ enyi m, abụ m onye nchịkọta akụkọ dị mfe nke na-atachi obi na ndị isi ya na-ata ya ahụhụ hahahahaha
elav oO kedu ihe ị ga-eme iji Obi ike na nzuzo: S?
Enweghị ihe ọ bụla nke sado, ọ bụ na m gwụrụ ike na ọ bụ ya mere m ji ede ebe a
The nkịtị ọrụ n'aka adịghị ịzụta ya, ma ụlọ ọrụ na Spain dịkarịa ala na-eme, n'ihi na dị ka sgae gafere ị ga-ahụ 😛
Ọ dị m ka nzuzu
Onye ọ bụla nwere ụzọ ha si ahụ ihe ... ụzọ ị si eche echiche banyere ụmụ nwanyị yiri Mongolian n'anya m, na-ekwu ma na-eche ihe niile ị na-ekwu / na-eche banyere ha ... Anaghị m ekerịta ya, yana agbanyeghị na m na-achọ gị na nke ahụ Echere m na ọ bụ nke gị, ana m asọpụrụ otu ị si eche. Onye ọ bụla nwere echiche ha, ịkwanyere nke a bụ ihe dị mma karịa ịkatọ ya 😀
Yup, echekwara m na ụjọ o nwere gbasara ụmụ nwanyị bụ Mongolian, dịka m chere na egwu ọ na-ege bụ Mongolian (na agbanyeghị na ahụbeghị m ya), ụzọ o si eji ejiji ga-abụ Mongolian na ọ bụghị ya mere anyị ji akwụsị hụrụ ya n'anya n'eziokwu? xD
Abụ m otu n'ime ndị Mongol na-azụ ya 😛
Elav itinye: «… Ọ bụghị ya mere anyị ji kwụsị ịhụ ya n’anya, nri? xD »
Ọ bụ eziokwu, obi ike n'agbanyeghị ihe niile ọ bụ ezigbo nwa.
Ee HAHA… ọ na-agba mbọ inye anyị echiche nke badass, yana ezigbo ndị ọbịa, mana…. Echere m na ọ bụ nwata dị nro ^ _ ' …. ọ maghị ma ọ bụ chọọ igosipụta ya 😀
N'oge ụfọdụ, ọ ga - ahụ onye ga - eme ya "ịmara onwe ya" LOL !!!
Ọ dị m ka nzuzu na esemokwu gị maka ịghara ikwenye na m bụ na ịchọghị inwe enyi nwanyị, mgbe ahụ ndị mmadụ na-eme mkpesa banyere iwe si na ite ahụ.
Ngwanu, amaghi m ihe inwe enyi nwanyi nwere na iku Photoshop ka o bu na o bughi.
Tonto bụ nu reggaeton nke posers ị masịrị na ụzọ m si eji ejiji bụ ihe mmadụ gwara m.
Mara mma? Ọ dị njọ na ị maghị m n'ezie, ị kpochapụrụ nzuzu gị ngwa ngwa (ọbụlagodi na ị na-ekpori ndụ na nkata).
Ka anyị hụ, ọ bụ nzuzu iji nọrọ ebe ịta nri ahụ maka Photoshop ọ bụrụ na ịnweghị ya, n'ihi na ihe ruru $ 399 bụ mmelite ma ọ bụrụ na anaghị mhie ụzọ.
Anyị agaghị emegharị ụlọ ọrụ iji Gimp ma ọ bụ Krita mana ọ dị njọ, yana karịa nsogbu nke bọọlụ ahụ, ụlọ ọrụ enweghị ike ịkwụ ụgwọ maka Photoshop.
Elva, Gatico mojao ị nwere azịza banyere ndị na-alụ nwanyị ọhụrụ na igbe mbata gị, ọ bụrụ na ịnweghị kodeks ahụ jiri VLC
Na ọrụ ndị na-eji ya n'ihi na ha nanị na-amasị sistemụ arụmọrụ na ọ na-eme ha obi karịa ndị ọzọ na usoro nke arụmọrụ, customization custom?
Echere m na emeela m ka o doo anya * ụdị abụọ kachasị nke ndị ọrụ *.
Kama iche na m agụghị nke ọma maka na ị naghị eche na m gụrụ nke ọma na m ka na-ajụkwa ajụjụ m n'ihi na m na-ewere ya ka ọtụtụ ndị 😉
Mmadu bi na nduhie 🙂
Kedu nnukwu esemokwu esemokwu nke data… chere, nwute, na nkwubi okwu a bụ ụlọ nke ikuku.
Ma ọ dịkarịa ala, ọ na-aga dị ka ndụmọdụ, ị nweghị ike ịgbachitere (ugbu a ị ga-agwa m na ị bụghị) na nke abụọ ihe dị ezigbo mkpa:
Ọ bụrụ na ị kwadoro ihe, nke mbụ, gosi ya. Ọ bụrụ na ị kwuo na e nwere nanị ụdị abụọ nke ọtụtụ ndị ọrụ, gosipụta ya (data, nyocha ...). Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịgbagha ya, ọ dịkarịa ala tụgharịa ya (ana m echetara gị na ị bịara nkwubi okwu ahụ). N'okpuru ajọ mbunobi nke onwe m enwere ike ikwenye na ndị ọrụ Linux niile bụ ndị ọbịa si n'akụkụ nke anọ nke bi na eriri afọ nke nnukwu mammoth 😉
Za "mmadụ biri site na echiche efu" bụ ụgha nke ụdị "ị nweghị echiche", "olee etu i siri bụrụ", "ị bụ troll", "ị bụ pro x", ogologo wdg. Not naghị arụ ụka na ha, ị kwenyere na ị nwere ikike dị elu karịa onye ọzọ na-ekwu okwu, ha na-agwụ ike na ha anaghị ekwenye.
Ikekwe ị atụghị anya azịza nye ajụjụ ahụ dabere na arụmụka ọ bụghị na iwe
Edere esemokwu ahụ n'isiokwu ahụ, ọ dịghị mkpa ịkọwa ya ihe ị maara nke ọma, tinye muylinux, blogdrake na ọtụtụ obodo ndị ọzọ nke Hispanic na ị ga-ahụ ihe m na-ekwu, ị ga-abụ onye mọnk bi n'elu ugwu ka ị ghara ịhụ ya Yabụ, ọ bụrụ n'inwe nchekwube, ị na-adị ndụ site na nrọ, ma gị na ha na -ebi nke ọma 🙂 mana ha abụghị ezigbo.
N'oge ahụ o doro m anya na ị maghị ihe dị iche na esemokwu na mmechi
(Site na lat. Argumentum).
1. m Asontụgharị uche eji eme ihe iji gosi ma ọ bụ gosipụta nkwupụta, ma ọ bụ iji mee ka mmadụ kwenye n'ihe a kwadoro ma ọ bụ gọnarị.
3. f. Mkpebi nke ewerela na okwu ma ọ bụrụ na ị gbasaa ya.
Ọsọ dị ezigbo mma na ha abụọ dị na ederede.
RAE, amaghi m ma imara ya, o nweghi ugwu, a na m adum odu ka juo onye okacha amara ma obu onye ntughari okwu. N'aka nke ọzọ, ana m atụ aro ka ị chọọ ya na María Moliner, nke bụ ọkọwa okwu ka mma
1 m Reasoning ji ya rụọ ụka ma ọ bụ * na-aza.
2 Akụkụ dị egwu nke ọrụ edemede, ihe nkiri, wdg. Omume, * ihe omume, ntughari, akuko ifo, aghụghọ, okwu, uzo, isi okwu, nkata. Agnition, anagnorisis, catastasis.
3 * Nchikota nke ekpughere ọdịnaya na nkesa nke ihe edemede, mgbe ufodu etinye ya na mbido ya.
4 * Banye ma ọ bụ mgbaàmà.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịga n'ihu ị nwere ike ịga akwụkwọ ọkọwa okwu Oxford nke nwere ugwu ya (na Bekee):
2a ihe kpatara ya ma obu ebum n’uche enyere na nkwado nke otu echiche, omume ma obu ihe omuma: enwere arumaru siri ike maka itinye akwukwo mkpesa [ya na nkpuru aka]: o juara arumaru na idobe ulo oru a ga-adi oke ego.
Ọbụna akwụkwọ nkà ihe ọmụma ma ọ bụ akwụkwọ ọkọwa okwu (ma ọ bụ ọbụna echiche ezi uche)
Mana gịnị kpatara ị ga - eji ruo ugbu a ma ọ bụrụ na anyị nwere wikipedia:
Arụmụka bụ isi na-eche banyere iru nkwubi okwu site n'echiche ezi uche dị na ya dabere na ogige.
Okwu arụmụka (site na Latin argumentum): ihe akaebe ma ọ bụ ihe kpatara eji kwado ihe dị ka eziokwu ma ọ bụ dị ka ihe ezi uche dị na ya; nkwuputa okwu ma obu edere ede. 1
Nkwubi okwu bu okwu na njedebe nke esemokwu, mgbe emechara. 1 Ọ bụrụ na arụmụka ahụ ziri ezi, mgbe ahụ ogige ahụ ga-egosi nkwubi okwu, mana nke a adịghị mkpa maka nkwupụta ka ọ bụrụ nkwubi okwu: naanị ihe dị mkpa bụ ebe ọ dị atụmatụ ahụ, ọ bụghị ọrụ ya
Na amaara m na ọghọm dị na Spen ma ọ bụrụ na o nwere ugwu, ọ masịghị m, ebe ọ bụ na anaghị m ebe ọzọ.
N'aka nke ọzọ, ị ka na-enye m ihe kpatara ya ọbụlagodi na RAE, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ arụmụka gwa m ebe ha nọ n'ihi na ederede gị naanị m na-ahụ nkwubi okwu, paragraf n'onwe ya bụ nkwubi okwu.
Azaghachiri m na n'otu aka ahụ, site na RAE, ị nyebeghị arụmụka, ị ga-ewepụ isi okwu ahụ.
RAE enweghị ugwu niile (ikekwe o ziri ezi karịa ihe m kwuru) na o kwesịrị, n'etiti ihe ndị ọzọ, n'ihi na n'agbanyeghị na enwere ọrụ, a na-enye ndị edemede akwụkwọ oche ahụ ma ọ bụghị ndị ọkà mmụta sayensị bụ ndị mụọ asụsụ ahụ. Otu n'ime ndị nyere RAE ụfọdụ ugwu bụ Lázaro Carreter bụ onye nwute n'ụzọ nwute afọ ole na ole gara aga ma nye ya Javier Marías oche ya, onye asụsụ ya bụ, ma ọ dịkarịa ala, na-arụ ụka.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu ozi ọbụladị akwụkwọ
Na njedebe nke a emeela ka ikuku dị elu
N'ezie enwere Algoban, ihe na - eme bụ na, m si ele ihe anya,Ugboko92 iji kwado ntinye ya nke mere na enweghị mmemme azụmahịa na, karịa ihe niile, na ọ gaghị ekwe omume na ha dị GNU / Linux Ọ na-ewepu ha mgbe ọ bụla ọ chọrọ. Ọ bụrụ na mmewere -ndị ọrụ anyị na-eji Linux maka eziokwu dị mfe na anyị masịrị ya maka ịrụ ọrụ nke ọma- ga - abanye dị ka ebumnuche njedebe gị niile ga - adaba.
Ị nwetara ya PandevOkwesighi ka gi na umu nwoke dika gi, adighi m nma na iche na n'ebe a enwere ndi mmadu mgbe ha na ede ihe ruru ntozu oke iji nabata echiche ndi ozo, kamakwa ọgụgụ isi zuru oke iji nwee ike ịrụ ụka site n'usoro echiche ma obughi na mkparita uka dika gi ma gi bu onye oji osikapa.
M, ụzọ i si mesoo Elgoban ọ gafere okwu enweghị mkparị, maka n ’ụzọ ọ bụla o tosiri inweta azịza dịka nke ị nyere ya ebe ọ bụ na o nwere ikike ọ bụla ịjụ ma nata azịza gbadoro ụkwụ na mgbagha ọ bụghị n’ebe a na-eme ya ka onye iberibe.
Ma ebe ọ bụ na anaghị m eso ụzọ ndị ahụ eme ihe, ọ yighịkwa ka ọ dị mma iji okwu Mongolian mee ihe n'ụzọ dị egwu, ebe ọ bụ na a na-eji ya eme ka ọ ghara ịkpọ aha agbụrụ kama ọ bụ nsogbu ebumpụta ụwa, dị ka okwu maka enweghị ike, Achọrọ m ịkele ndị ahụ ohere nke ukwuu Alejandro dị ka Ernesto Ha nyere m ka m sonye na ụdị ọgwụgwọ na obi ebere ha nyere m na ana m atụ anya na m ga-aga n'ihu na-adabere na ọbụbụenyi ha, mana m na-ala ezumike nká dị ka onye na-arụkọ ọrụ ebe a na-achọ ha ọfụma.
Ndo Tina ahubeghi azịza gị. Ị nwetara ya
Ajuju m juru eju. Anaghị m atụ anya azịza mana mana, n’ajụjụ, mee ka m mara echiche m ma gbaa ume ka a kparịta ụka.
Mana ọ bụrụ na ịchọghị ịrụ ụka ma ọ bụ mkparịta ụka site na iji arụmụka ma ọ bụ data na ị ga-aga ozugbo mwakpo nke onwe, ọ ka mma ịgbachi nkịtị.
Mkparịta ụka na ịntanetị ga-abụ ihe na-atọ ụtọ karị ma ọ bụrụ na ndị mmadụ nwere ihe ọmụma banyere mgbagha na ụgha, ebe ha na-enyere aka iwulite mkparịta ụka na-agbanwe agbanwe ma na-agbanwe agbanwe dabere na ezi ogige ma ọ bụghị na "Echere m ihe."
Echegbula ma ọ bụrụ na okwu gị adịghị ka mkparị nye m. Na mkparịta ụka na ịntanetị m ahụla nke ukwuu na obere nwere ike ịtụ m ụjọ ma ọ bụ yie ihe rụrụ arụ.
Dị ka onye iberibe m na-amaghị, ma ọ gbalịrị ime ka m yie onye nzuzu, na n’amaghị m bụ ihe ọchị. Ma, ọ bụghịkwa ihe ọhụrụ.Ọzọ aghụghọ ndị ọzọ ejiri mee mkparịta ụka ugbu a bụ nke a na-ejikọ "ị nweghị echiche", nke sụgharịrị gaa "Enweghị m echiche ọ bụla mana ọ bụrụ na m hapụ ahịrịokwu a, m na-azọpụta onwe m na-arụ ụka yana ọ nwere ike ịdị ka m nwere ụfọdụ echiche". N'ọnọdụ ka ukwuu e nyere ya amaghị nke ọma ya.
PS Ọ bụ owu 😉
Na mbụ, otu puku mgbaghara, ịrụbiga ọrụ ike ekweghị m sonye.
Ugbu a, ka anyị ruo isi: Gini mere na enweghị ngwa azụmaahịa na Linux? N'uche m, ọ bụ maka na achọghị ya, ka m siri mara, ọ nweghị distro nwere ezigbo ụzọ Adobe, iji maatụ, iji gwaa mmekọrịta azụmahịa. Ndi pere mpe nke ndi oru abughi ihe omuma ebe ndi oru MacOSX anyị anaghị eweta ihe karịrị 5% nke ndị ọrụ PC niile.
Nsogbu siri ike, dịka m si hụ ya, bụ nke ahụ Linux e jikọtara ya na echiche dị iche iche na, ọ bụ ezie na ha mara ezigbo mma ma dị mma, abaghị uru. Echere m na obere pragmatism agaghị afụ ụfụ.
obi ike, Emelitere m ngwugwu ahụ ihe karịrị ọnwa asaa gara aga Adobe CS4 a Adobe CS5 na akwụghị m ụgwọ ihe karịrị US $ 350 maka nke ọ bụla. Ana m ekwu maka nchịkọta zuru ezu: Photoshop, Onye ihe osise, Indesing...
Anyị na-ekwu maka eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ ndị ọrụ mac dị ka isiokwu nke imewe na edezi….
Nke ahụ enweghị ihe jikọrọ ya na ya, kedụ ihe na-agaghị emebido Linux -Mint ọmụmaatụ- soro mmekorita ahia Adobe ma site ebe ahụ malite mkpọsa iji dọta nde mmadụ niile ahụ na-ese ihe nkiri na-arụ ọrụ Windows?
Ọ bụ maka iru ahịa ọhụrụ, anaghị ere maka ndị jiri ya Linux
O doro anya na ọ nwere ike ịbịa, mana n'ezie adobe ga-akwụsị ịrịọ gị ego, nke ahụ dị mfe, ọ bụrụ na linux bụ 1,4%, lint mint ga-abụ 0.15%, a ga-enweta ihe kachasị ma ọ bụrụ na distros niile ga-arịọ maka ya, na mgbe Asim ihe nile di.
«... ma n'ezie Adobe ga-ejedebe na-arịọ gị maka ego»
Ugboko92, nke ahụ bụ ụdị arụmụka site na Ọ B IMGH IM IBBIBR. na ụfọdụ ụbọchị na Linux nwere ngwa ahia. Ha na-ekwu na ọ bụ maka ego, ọbụna obi ike na-ewe nọmba nzuzu -US $ 1,266.66 na ọnụego mgbanwe- dị ka ụgwọ Photoshop Mgbe nke ahụ abụghị eziokwu, a na m ekwughachi na m kwụrụ US $ 350 maka ngwungwu nkwalite zuru ezu.
«... ọ bụrụ na Linux bụ 1,4%, lint mint ga-abụ 0.15% ...»
Nke ahụ bụ ihe dị ugbu a ma ọ ga-adịkwa otu ahụ? Ànyị dị mkpụmkpụ ma anyị enweghị ike icheta mmadụ ole anyị nwere ike ịbụ?
M kwughachiri, n'ihi na ọ bụ naanị okwu nke hu * vos ... na enweghị uche.
Anyị na-ekwu maka otu puku afọ na anyị ga-agafe 1% ma anyị erutebeghị 2, ị kwenyere n'eziokwu na na-enweghị onye ọ bụla tinyere pastọ n'ahịa anyị ga-anọ ụbọchị ụfọdụ site na 2? Wa a dabere na otu ihe, ego, ọ bụ isi okwu maka ọganiihu azụmaahịa ma ọ bụrụ na ịnweghị ike mejupụta telivishọn mba na mgbasa ozi, atụla anya na ị ga-ezere itolite n'ihi na ọtụtụ mmadụ amaghị kọmputa. ha na-eji ihe abịara tupu arụnye iji hụ facebook, maka nke a, anyị anaghị aga n'ihu, nke ahụ dị mfe. Ọ bụghị ịgha akwa, ọ na-atụfu ego na ego karịa ma nwee ike ịnye ngwaahịa dị iche na ndị ọzọ, karịa ihe ndị ọzọ anaghị enye (nke a na-akpọ uru asọmpi nke iche), mana ị nwere ike ha, anyị ọjọọ. Googlebọchị Google tinyere 1000 ijeri dollar iji kwalite Linux, mgbe ahụ enwere m ike ikwenye na anyị ga-abawanye ọtụtụ.
Belọ ọrụ adobe ahụ bụ n'efu maka m, naanị gwa ha okwu ma ọ bụrụ na ị bụ nwa akwụkwọ, mana n'ezie anyị anaghị ekwu maka onye ọrụ nwere itinye ego, mana distro na ajụjụ iji kwenye adobe, ọ bụ ihe dị mfe nghọta, na ị chọghị ịkọwa.
Ọ ga-aba uru karịa ịme egwuregwu maka Linux karịa ịfefe usoro dị otú ahụ na ikpo okwu anyị. Egwuregwu nwere ike ịba uru euro 40,50, ọ bụrụ na mmadụ 30 puku mmadụ zụta ya, eweghachitere itinye ego ahụ, ebe ọ bụ na enwere ike ịnweta ya, ọtụtụ mmadụ ga-azụta ya, mana mgbe anyị na-ekwu maka adobe photosho`p anyị na-ekwu maka ngwa ọrụ ọkachamara na akụkọ ihe mere eme dị iche ,.
"... anyị anaghị ekwu maka onye ọrụ nwere itinye ego, mana distro na ajụjụ iji mee ka Adobe kwenye, ọ bụ ihe dị mfe nghọta iji ghọta na ọ dịghịdị mkpa ịkọwa ya."
Aghọtara m ya site na mbido, mana ọ bụ ịtụle priori nke ahụ Adobe Ọ ga-eme ya, nke bụ naanị ihe gbasara mmadụ. Ma ọ dịkarịa ala ruo ugbu a, ahụghị m onye ndu distro ọ bụla na-ekwu ụdị ihe ahụ.
Linux nwere ikike dị ukwuu na ụlọ ọrụ ihe nkiri eserese n'ihi na Adobe na-achọsi ike na sistemụ ahụ, ọ bụ ya mere anyị ji ahọrọ iji ha MacOSX na na Windows n'agbanyeghị ihe dị iche na-akwụ ụgwọ dị n'etiti otu kọmputa na ọzọ.
Ọ bụrụ na ndị ọkachamara na-emepụta ndị na-eji taa Windows, n'ihi na ha enweghị ike ịzụta a Apple, ha nwere ike iji Adobe na usoro dị ka anụ siri ike ma sie ike dị ka Linux ha ga-. Ọzọkwa, ihe ị ga-echekwa na Windows Ga-etinye ya na ngwugwu ahụ, nke maka ndị na-azụ ahịa enweelarị nnukwu uru.
Ma ọ bụkwa naanị ihe atụ, m tinyere ya n'ihi Adobe bụ ihe siri ike nke n'onwe ya etinyegoro nnukwu ego na mgbasa ozi, na mgbakwunye ịbụ akara ama ama ma mana ọ bụrụ na ịchọrọ, anyị nwere ike inye ihe atụ Sega. Nke na - ewetara anyị otu ihe ahụ ... ọ bụ ihe gbasara uche ịlaghachi azụ ntakịrị -ma ọ bụ ọtụtụ- site na purism nke ngwanrọ n'efu.
Ugbu a, isi ihe m na-etinye ya site na gburugburu m ma ọ nwere ike ọ gaghị adị gị ka ọ dị, mana nke ahụ bụ ihe m na-ahụ, belụsọ ma ajụjụ mbụ gị "Gịnị kpatara enweghị ngwa azụmahịa na Linux?" kwuo okwu ma rụọ ọrụ naanị iji kpughee echiche gị dị ka ihe bara uru zuru ụwa ọnụ, nke ị ga-edo anya ka ị ghara igbu oge ọ bụla ọzọ.
Ọ bụ eziokwu na ọ bụghị ọtụtụ mmadụ maara maka Mgbakọ na ha na-eji ihe akọwapụtara, M, n’onwe m, na-eche na dịka ndị ọrụ Linux, obere ihe anyị nwere ike ime bụ ịnwa ime ka ọtụtụ ndị kwenye iji sistemụ arụmọrụ anyị, ebe ọ nwere ọtụtụ uru. karịa Windows, ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime anyị anaghị akwụ ụgwọ ma ọ bụ nye ihe ọ bụla maka ya, ma ọ dịkarịa ala nyere ya aka dị ka o kwere mee, n'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ugbu a na-anọchi anya 1%, mana ọ bụrụ na onye ọrụ Linux ọ bụla nwere ike ịme ka otu onye bido. iji Linux kwa, ị ga-eche n'echiche mmetụta ọ ga-enwe n'ụwa niile? Na 1% ga-eto oke oke! Na eziokwu bụ na enwere ọtụtụ ndị na-amaghị sayensị kọmputa, ọkachasị ndị okenye, mana ndị pere mpe na-abawanye aba n'ụwa a ma ga-amata karịa anyị, n'ezie, ihe ị ga - eme bụ ịkụziri ha site nwata ma mee OS gi "ndabara" Linux, obughi Windows
Echere m na nke a, ọ bụ ezie na ọ bụ ụlọ zuru ezu, ee ee, ọnụahịa ahụ bụ nzuzu:
Ma gini kpatara imefu otutu ihe na nke ahu ma oburu na odi http://www.adobe.com/products/creativesuite/design.edu.html ?
399 $ LOL, ọ ka dị ọnụ ala xD, daalụ chukwu m bụ nwata akwụkwọ na anaghị m akwụ ụgwọ ya XD
Ekwenyere m na nkwupụta nke Tina Toledo, mee njikọ, mint nwere ike ịbụ 0.15%, mana iji mee njikọ ahụ ịkwesịrị iche maka ihe ọ nwere ike bụrụ, yana ọrụ n'ezie.
Otu akụkụ nke m kwenyere, na nke ahụ bụ naanị nke ahụ, bụ na ị nwere ike "tụọ egwu" ihe Richard Stallman ga - ekwu, ị hụrụ na ọ bụ koodu mechiri emechi, m wee kwughachi, nke ahụ mere m, dịka ọtụtụ ndị na - eso ...
Anaghị m ekwenye n'okwu gị, na sọftụwia a mepụtara bụ n'efu apụtaghị na onye na-eme ihe omume a na-ekwu okwu adịghị akwụ ụgwọ maka ọrụ ya (n'ezie na ha na-eme ya na Red Hat, dịka ha kwurula, ma ọ bụ na Novell / Attachmate , ma ọ bụ Canonical), ihe dị iche na ngwanrọ nwere ikike bụ na ndị mmemme afọ ofufo nwekwara ike ịnye koodu na azịza, ọbụnakwa jiri koodu ahụ iji mepụta ngwa ọzọ, mana ikikere GPL n'onwe ya na-echekwa ndị dere ụdị sọftụwia ahụ iji weghachite koodu ahụ site na nke atọ otu, na-amanye aka maka ndị edemede mbụ.
Mana dịka m kwuru, ọ bụ echiche hiere ụzọ iji jikọtara sọftụwia na - akwụghị ụgwọ na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, yana aha ọjọọ ahụ na ị gaghị enwetali achịcha gị na ya.
Anyị ga-ahụ. You na-akwụ ụgwọ maka gimp? You na-akwụ ụgwọ maka konversation, xchat, clementine, libreoffice, scribus, netbeans, 97% nke sọftụwia dị na nchekwa na wdg?
You chetara ihe atụ dịka onye ọrụ nepomuk ahụ na-akwụbeghị ụgwọ ọnwa ọ bụla? Atụmatụ a abụghị maka ụlọ ọrụ na-akwụ gị ụgwọ, nke site n'ụzọ, ọ dị ole na ole na-ana ha ego, kama ọ bụ na ị na-ana onye ọrụ maka mmemme gị, ihe doro anya ma dị mfe, mana n'ezie ọ bụrụ na ịchọghị ịhụ, ị ​​chọghị ịhụ. Ọ bụghị mmadụ niile na-arụ ọrụ maka Novell, Canonical, na Red Hat.
Mana ọbụlagodi na ị naghị arụ ọrụ maka ha, kedu ihe ga - egbochi gị ịkwụ ụgwọ maka sọftụwia ị mepụtara ọ bụrụgodi na ị nyere ya ikikere n'okpuru GPL?
Nke ahụ dị mfe nke ukwuu, enwere m ike ịgba ụgwọ maka sọftụwia m mere, nke ahụ doro anya, mana ozugbo erere nke ọzọ nwere ike inye ya, ị ghọtara m? ọ bụ naanị na.
Site n'ụzọ, ekwenyere m Esmorga kpam kpam.
«Ihe kachasị mma na ndụ bụ n'efu
Mana inwere ike idobe ha maka nnụnnụ na a beụ ...
Ugbu a nye m ego, (nke ahụ bụ ihe m chọrọ)
Lovin gị 'nye m ụdị obi ụtọ ahụ,
Ma okwu gi 'adighi akwu ugwo… »
Wepụ si Ego (Nke ahụ bụ ihe m chọrọ)
Ọ bụ ihe zuru oke n'ime ụwa GNU / Linux na mgbe ajụjụ bilitere Kedu ihe kpatara enweghị ngwa azụmahịa na Linux? Ka anyi mechaa site na itinye onwe anyi na ngwanrọ ngwanrọ a na - acho, uru na uru ya na enweghi ajuju na ajuju mbuKedu ihe kpatara enweghị ngwa azụmahịa na Linux?- Ọ na-abụ ihe dị okirikiri nke anyị na-atụgharị iji chọta ụzọ ọpụpụ n'okporo ámá kachasị anyị mma.
1.-Ọ baghị uru azụmahịa n'ihi na ndị ọrụ GNU / Linux karịrị 1% nke ndị ọrụ PC niile.
Nke a bụ ọkara eziokwu. Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ ugbu a na-egosi na nke a apụtaghị nsogbu, ihe a ga-atụle, kama, ole mmadụ ole na-eji Windows chọrọ ịkwaga GNU / Linux mana ha anaghị eme ya n'ihi na enweghị ụdị sọftụwia ha na-eji arụ ọrụ GNU / Linux
Adobe enwetaghị ebe ọ na-ịkụ nzọ site na ọtụtụ ndị ọrụ nke Windows ma site na, mgbe ahụ, ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị ọrụ nke Apple macintosh, bụ ndị bụrụla ndị ahịa ya kacha eguzosi ike n'ihe ruo ọtụtụ afọ n'agbanyeghị nkwenye na Apple y Adobe na anyị ga-eme ihe n'eziokwu, ma ọ bụrụ na taa kọmputa nke Apple Ha nwere aha ọma nke ọma dịka otu n'ime ngwaọrụ kachasị mma maka edezi vidiyo na-abụghị usoro na eserese eserese na-ekele maka mmepe a.
2.-Mmepe nke ngwanrọ azụmaahịa na mgbasa ya ga-egbu mmepe nke sọftụwia na - akwụghị ụgwọ
Nke a abụghị eziokwu kpamkpam. Enwere ọtụtụ ngwanrọ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ nke mmepe ya na - eguzosi ike, dịka GIMP y Mmepe emepe ka ihe atụ, ọ bụghị site na ịdị adị nke Photoshop y MS Office kama ọ bu n'ihi enweghi ihe. Lee mgbe ahụ abụghị «Istdị adị nke ...» kama ọ bụ enweghị ezigbo ọdịbendị nke nkwado akụ na ụba maka ndị mmepe sọftụwia n'efu.
Ekwenyesiri m ike na, n'agbanyeghị enweghị ọnụ ọgụgụ dị na aka, na ihe karịrị 80% nke ndị ọrụ GNU / Linux ndị na-agbasi mbọ ike ịgbachitere ngwanrọ na ndụ ha enyere penny. Ọtụtụ ga-ekwu "Ọfọn ... M imekota na-eji ihe omume na ọ bụrụ na m na-achọpụta a ahụhụ m na-akọ ya" na nke ahụ dị ezigbo ire, mana dịka mpekere nke egwu ahụ m tinyere na mbido kwuru «Ihe kachasị mma na ndụ bụ n'efu, mana hapụ ha nnụnụ na a theụ, ugbu a, nye m ego, nke ahụ bụ ihe m chọrọ. Hụnanya gị na-akpalite m nnukwu mmetụta, mana ịhụnanya gị anaghị akwụ m ụgwọ ... »
N'aka nke ọzọ, enweghị m mmasị, maka ebumnuche bara uru, ma m nwere ike gbanwee koodu nke Adobe PhotoshopNke mbu, nihi na amaghi m ka esi eme ya, na abuo, n'ihi na mmasighi m ime ya, azutara m ya ka m jiri ya, obughi imeghari ya. Nke a bụ n'ezie otu n'ime ihe ndị kachasị m mkpa na m na-eche, nke a ọ dị mkpa nye ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ PC bụ ndị naanị nchegbu ha bụ na ngwanrọ ha na-eji bụ na ọ na-arụ ọrụ nke ọma nakwa na ọ na-eme ihe ha chọrọ ya. IHE?
3.-GNU / Linux na-anọchite nkà ihe ọmụma nke ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ na ya mere ọ ga-abụ ihe na-adabaghị adaba ịnabata nnyonye anya nke ngwanrọ ngwanrọ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ bụ maka nnukwu monopolies nke naanị ebumnuche ya bụ ịba ụba akụ.
O doro anya na ọ bụ ezigbo echiche nke m kwenyere ... mana ọbụlagodi anaghị m ahụ njedebe bara uru ma ọ bụrụ na ekeghị ụkpụrụ na, opekata mpe, ndị mmepe ga - eweghachi ego ha ma nweta oke uru n'otu oge.
N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ dịka Apple, Microsoft y Adobe ruo n'ókè nke na ọ dị ka ọ dịbeghị ezigbo ihe ha mere. A extremism, na-eche na ihe niile na-rere ure na Denmark, anaghị ekwe ka emepụtaghachi ọtụtụ usoro ya nke, na-enweghị obi abụọ, ga-enye ọtụtụ ihe iji wee kwado praxis nke sọftụwia n'efu. Mgbe m mepụtara isiokwu na Gimp M meghere ya site n'ihota otu akpaokwu site na Rudyard kipling: “Ndị ohu isii na-eme ihe n'eziokwu kụziiri m ihe m maara; aha ha bu olee otu, mgbe, ebee, ihe, onye y ihe mere. " Ọ dị m ka na ngalaba nke sọftụwia na - akwụghị ụgwọ “kedu” na “gịnị kpatara” doro anya nke ọma, mana ọ bụghị “etu esi”
4.-Ngwá ọrụ azụmahịa dị oke ọnụ, yabụ naanị 'Mongols' ga-akwụ ụgwọ ya
Na nke mbụ, ọ dị m ka enweghị nkwanye ùgwù zuru oke iji dị ka ntụnyere ọnọdụ nke otu ndị nwere ikike dị iche iche dị ka ihe atụ nke onye nzuzu, ma opekata mpe na onye ọ bụla mee ya kwesịrị ịrịọ mgbaghara.
Ugbua n'ime ihe, ọ pụtara na enwere ihe GNU / Linux na ha bụ ọkara eziokwu ... ma ọ bụ ọkara ụgha, ọ dabere n'ihe e bu n'uche, na otu n'ime ha bụ na ngwanrọ azụmahịa dị oke ọnụ.
Nke a bụ ụgha na m ga-egosi ihe kpatara ya: otu n'ime ngwugwu kachasị ọnụ bụ, na-enweghị mgbagha, ndị enyere Adobe... ma ọ dịkarịa ala nke a bụ ihe ndị na-agbachitere free software na-ekpeghachi ad nauseam, agbanyeghị ọtụtụ -ọnụ ọgụgụ ka ukwuu n'ime ha- na ndụ gị i jiri sọftụwia ọ bụla Adobe Dịka ngwa ọrụ, ya mere, ha enweghị ike inyocha oke ego / uru.
Mana, Ọzọkwa, ha hapụrụ, n'ihi amaghị ama ma ọ bụ ebumnuche, eziokwu ahụ Adobe na-ere nchịkọta na ọnụahịa dị ala karịa uru azụmaahịa ha nye ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi (US $ 450) yana ọbụlagodi n'ọtụtụ ọnọdụ na-enye ha.
Ugbu a, ekwenyere m na US $ 1,900 nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ ọkachamara na-akwụ ụgwọ maka ngwugwu ahụ nwere ike ịbụ nnukwu ego, mana a ga-enwerịrị ihe ị ga-echebara echiche: a na-ewepụ ya na ụtụ isi, ya mere na-ewereghị ya ka ihe efu.
Nkwubi okwu m: Nsonye nke ngwanrọ azụmaahịa na Linux Ọ nọghị kpam kpam na mkpebi nke "monopolies" kama kama ọ bụ otu echiche, n'ọtụtụ ikpe, nke ndị isi nke GNU / Linux na imirikiti ndị ọrụ ya na-ahụ "monopolies" ndị a dị ka nnukwu onye iro iji merie. Mgbe elechara uru na ọghọm anya nke ọma wee nwee mmekọrịta n’etiti akụkụ abụọ a, ihe ọzọ ga-abụ. Ka ọ dị ugbu a, m ga-anọgide na-eche na naanị ihe na-efu bụ na ịchọrọ ... ọ dịghị ihe ọzọ.
M na-ama kpọtụụrụ Adobe ịhụ ihe ha mbipute bụ ma si otú emechi a ogologo ụka.
You mepee isiokwu ma nwee olile anya na enweghị ụzọ echiche ndị ọzọ? Nwoke, ajụrụ m gị n'ihu: ọ bụrụ na ajụjụ ị ji aha edemede gị bụ naanị dị ka nkwupụta okwu iji bulie echiche gị, o zuru ezu iji kwuo ya wee kwere m na m na-ahapụ ịhapụ echiche m, ọ dịghị mkpa ịkpọtụrụ Adobe. Mana ọ bụrụ na ọ bụ ajụjụ a na-emeghe ka anyị niile chee echiche, ahụghị m ihe kpatara ọ na - enye gị nsogbu na ndị ọzọ, dịka Amilcar, Elav ma ọ bụ echere m na ị. Ọ bụ n'ụzọ ahụ ka m si ghọta nke gị "Enweelarị m kpọtụrụ Adobe iji hụ ihe mbipute ha bụ wee mechie ogologo mkparịta ụka a"
Ọ na-ewute m nke ukwuu na m hapụrụ echiche m na isiokwu gị yana ebe ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume ihichapụ ha n'onwe m, ị nwere ike ịme ya, maka m nke a bụ mmechi ikpeazụ m n'oge a.
Ebee ka o kwuru: «dika Amilcar, Elav ma ọ bụ m onwe m na-eche na ị »
Ọ ga-asị: «ka Amilcar, Elav ma ọ bụ m onwe m na-eche dị iche karịa gị »
Dika ichoro, inwere onwe itughari dika uche gi si di, ma aghotala asusu gi, mana ebe obu na ikwuru ihe ikwuru, ma obu aga m anwa ịkọwa ya, enwere m ihe ka mma m ga-eme.
Zuru, ọ bụghị otu okwu.
Ọtụtụ ihe ga-agbanwe site ugbu a gaa n'ihu ... nke a adịla oke.
Kọmputa $ 25 na-abịa na Linux
Kachasị mma Linux Obere nkesa